I-Pacífico Condo Enokuhlangenwe Nakho Okujabulisayo kwe-Coco
Coco, Provincia de Guanacaste, i-Costa Rica
Jabulela ukuhlala kwakho kuleli fulethi elinethezekile elinekamelo elilodwa eligcwele ukukhanya kwemvelo. Uma uvula umnyango wamukelwa ngokushesha ngama-accents okuhlobisa anikeza ifulethi umuzwa wesitayela. Inekhishi elingaphezulu lemabula elivulekile elinazo zonke izinsiza ezidingekayo ukuze uhlale. Igumbi lokuhlala lifaka umbhede usofa okwazi ukufinyelela ithafa elibheke echibini loMfula iLazy. Inegumbi lokugezela elilodwa elanele elingafinyelelwa ngekamelo lokulala elikhulu noma igumbi lokuphumula.
I-Pacífico iyindawo emangalisayo yokuhlala e-El Coco. Izingadi zayo eziluhlaza kanye nendawo ekahle kwenza i-Pacífico ibe indawo ongeke wayikhohlwa. Lesi sakhiwo siseduze nezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela ezimnandi, nezitolo zekhofi! Inamachibi ahlukahlukene ahlanganisa umfula ovilaphayo omangalisayo kanye ne-jacuzzi ukuze izivakashi zijabulele. Izivakashi zase-Pacífico zingakhokha imali yokungena ($25 pp/ngosuku noma u-$70 ngesonto) ukuze ujabulele Iklabhu Yasolwandle esesitayeleni ezokuthutha ikuyise kwelinye izinga. Ungathenga ukudla neziphuzo ngenkathi ulalele umculo wangemuva ohlangana namagagasi olwandle ngokuphelele. Yindawo ekahle yokuhlala i-Coco beach vibe ngokunethezeka nobuhle.
Uma ufika e-El Coco uxhuma khona manjalo kuvibe yayo ye-“Pura Vida” ongeke ukuthole kwenye indawo. Uzokwazi ukungena shi endleleni yokuphila kaCoco ngokushesha. I-Coco beach iqhele ngekhilomitha elilodwa ukusuka e-Pacífico lapho ungazulazula khona ezitolo nasezindaweni zokudlela lapho uya ogwini. Idolobha kanye nolwandle kuzokukhanga kalula.
I-Pacífico iyimizuzu engama-25 ukusuka e-Daniel Oduber International Airport. Ukuqashwa kwezimoto akudingekile kodwa kunconywa kakhulu ukuze uhlole indawo ezungezile yase-El Coco.
Hlola ezinye izinketho ezise- Coco namaphethelo